Masoandron’ambanivohitra • AoRaha
Indraindray, mba madiodio ihany ny sisin-dalana tahaka izay tazana tamin’iny tamboho ivelan’ny tsena Pochard iny. Asa na nalefa sa nandeha nankaiza ireo mpivarotra mbamin’ ny sarety sy posy ary kalesa nahazatra ny maso tamin’iny lalana iny. Indrisy moa, fa raha malaladalaka ny aty Soarano, dia manondrana tsy misy toy izany ny aty Ankorondrano hatreny Ivandry rehetra iny.
Resaka mpivarotra aloha no atao eto. Avy aiza ny ankamaroan’izy ireny ? Avy any ambanivohitra, nikasa hahita ny anjara masoandro sy ny paradisa teto an-drenivohitra. Izay miakatra avy any, na lasa mpanampy an-trano na mpanasa lamba etsy sy eroa, na mpivarotra mameno ny arabe sy eny an-tsisin-dalana. Mety ho mahita fahafinaretana amin’ny fiainany, angamba, izy ireny matoa tsy te hiverina any an-tanàna intsony, nefa maminavina ny hibata ny tontona lehibe koa any aoriana any ka hody ventiny ny rano nantsakaina. Rano inona no nantsakaina teto, fa tsy ranobe toy ireny nandravarava tamin’ ilay oram-baratra tamin’ny herinandro lasa teo ireny. Vesaran’ny an-kanenjika amin’ny pôlisy monisipalin’ Antananarivo renivohitra. Dia ompa sy ozona no ataon’ireo mpampiasa lalana. Eny, vava tsy miloaka, fa maro no sorena noho ny afitsok’ireo mpivarotra tompon’ny arabe eto afovoan’Iarivo. Avy aiza izy ireny ? Avy any ambanivohitra, nanonofy ny fiainana mamy teto an-drenivohitra.
Antony iray isan’ny goavana mahatery ny lalana ireny mpivarotra tsy ara-dalàna eto Iarivo ireny. Tsy vao haingana fa efa olana nifandimbiasan’ireo mpitantana tanàna hatramin’izay. Mety ho tsy misy vahaolana matoa vitavitan’ny fangalam-piery fotsiny, ka androany mahafaoka be ny mpanenjika, rahampitso manenina ny arabe ry enjehina. Tsy hoe masobe tsy mahita, fa tanam-polo tsy mahavita azy sy fahefana tahitahiana ny an’ireo mpitondra, hatrany amin’ny faran-tampony any. Mba efa nisy nandroso vahaolana amin’ny fampodiana azy ireo any amin’izay tany nihaviany avy any ve Miaraka amin’ny fepetra mahomby hatao amin’izany, satria efa navelanao handika
lalàna izy ireo dia tsy maintsy manarina moramora sy mihevitra azy ireo ho toy ny manana ny rariny ny fahefana isan’ambaratongany.
Aleo hodian-tsy hita ny tsy fahombiazan’ny pôlitika fanadiovana teo aloha, fa raha mibanjina ny ankehitriny, nahoana no tsy mba anamboarana ambanivohitra masoandro ihany koa ireny sokajin’olona nihevitra ny hahita ny soa teto Iarivo ireny? Tsy Antananarivo irery, hono, no Madagasikara. Tsy ny renivohitra irery no tanàna ka mendrika “Tanamasoandro”. Samy handamina sy hanavao ary hamindra ihany, dia hoy isika hoe ampodio any amin’ny tany hahavelona azy kokoa ireto mpivarotra, mpitarika sarety sy posy ary kalesa mameno tanàna ireto. Aza avela hibahan-toerana, handika lalàna, tsy hampiditra hetra… tena tsy mamokatra eto, fa mbola tena midadasika
i Madagasikara. Any ambanivohitra aza no tena masoandro rehefa ampidirina ao anatin’ny pôlitika ankapoben’ny
fanjakana ny mponina any!
Tsimialonjafy sy Ambanin’Ampahamarinana :: Manomboka miverina eny amin’ ny tranony ireo fianakaviana nafindra